Ngwa - BEIJING ANCHOR Machinery CO., LTD
Ihe nfuli ndi ozo bara uru nke uku, wepu otutu oge nke ewepuru na-ebughari ibu di ala na ebe di iche iche nke ebe owuwu ihe. Ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke eji arụ ọrụ mgbapụta mmiri bụ ihe akaebe na nrụpụta ọrụ na arụmọrụ nke sistemụ. Dika oru oru nile di iche, enwere uzo di iche iche di iche iche nke nwere ike ighota ndi ozo di iche iche na ihe ngbaghari nke ebe owuwu, anyi gha eleba anya na ihe ha bu.
Ọganihu nfuli bụ ndị nzọpụta nke ọrụ owuwu ebe achọrọ ihe siri ike na o siri ike iru mpaghara. Enweghi nfuli mgbapụta, ibuga ihe gaa ebe ndị a ga-achọ ọtụtụ njem na-agwụ ike ma na-agwụ ike na wiilị na-agba agba na-agagharị na mbụ, mana imirikiti ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-enye nfuli nfuli iji wepụ nsogbu a.
N'iji ogwe aka na-achịkwa, nke na-agbanye ụgbọ ala, enwere ike idozi mgbapụta ahụ n'elu ụlọ, n'elu steepụ na gburugburu ihe mgbochi iji hụ na enwere ike itinye ihe nkedo kpọmkwem ebe achọrọ ya, ebe ọ bụla ọ ga-abụ. Nfuli ndị a nwekwara ike ịkwaga nnukwu nnukwu ihe na obere oge. Ogwe aka nke mgbapụta boom nwere ike ịgbatị ruo mita 72, yana mgbatị enwere ike, ọ bụrụ na achọrọ ha.
A na-ejikarị nfuli nrịba ama maka:
• Kwanye ihe ka elu, dịka ụlọ elu na ụlọ
• Umpkwanye mgbapụta na mpaghara ebe amachibidoro ịnweta, dịka n'azụ ụlọ ndị a kpụkọrọ akpụkọ